सुन्तलाको बोक्रा फाल्दैहुनुहुन्छ,पर्खनुस !
सुन्तला भनेपछि सवैको मुख रासउछ । झन चिसो महीनाको घाम तापेर सुन्तला खानुको मज्जा पनि वेग्लै हुन्छ । सुन्तलामा प्रशस्तै भिटामिन सि लगायतका पोषण तत्वहरु पाइन्छन् । प्राय हामी सवैको वानी छ,सुन्तला खाने तर बोक्रा फालिदिने । हामी सुन्तलाको बोक्रा छोडाएर फ्याँक्छौँ र गुदी मात्र खान्छौँ । तर त्यही फालिएको बोक्राले हाम्रो ज्यान वचाउन सक्छ । सुन्तलाको बोक्रा खाइँदैन मात्र होइन यसको अरु काममा पनि प्रयोग…विस्तृत समाचार »
स्वाइन फ्लुबाट तनहुँमा मुस्लिम युवकको मुत्यु
२,माघ,तनहुँ । तनहुंका एक मुस्लिम युवकको स्वाइन फ्लुबाट मृत्यु भएको छ । व्यास–२ डाङ्ग्रेखोल्सी निवासी ३६ वर्षीय युसुफ मियाँको स्वाइन फ्लुका कारण मुत्यु भएको छिमेकीले जानकारी दिएका छन् । दुई हप्ता अघि देखि ज्वरोले थलिएका युसुफलाई गत शनिवार मणिपाल शिक्षण अस्पताल लगिएकोमा त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि मंगलवार हेलिकोप्टरमा राखि ग्रान्डि अस्पताल काठमाडौं लगिएको थियो । ग्राण्डीबाट पनि टिचिङ अस्पताल लगि उपचार भइरहेकोमा शुक्रवार विहान टिचिङ…विस्तृत समाचार »
जाजरकोटमा मैनबत्तीको साहारमा उपचार
२ माघ, जाजरकोट । जाजरकोटको जिल्ला अस्पतालमा मैनबत्ती बालेर बिरामीको उपचार हुने गरेको छ । विद्युतको नियमित र भरपर्दो सुविधा नहुँदा १५ शय्याको यस अस्पतालमा उपचार गर्न आउने बिरामी मर्कामा रहेको नागरिक दैनिकमा न्युज छ । अस्पतालमा सोला जडान गरिए पनि ब्याट्री भोल्टेज पर्याप्त छैन । सोलारबाट पयाप्त भोल्टेज नभएपछि मैनबत्ती बालेर बिरामीको उपचार गर्नुपरेको अस्पतालकी अनमी नारायणी शाहले बताइन ।विस्तृत समाचार »
चुरोट पिउनुहुन्छ ? दिमागको पत्र पातलो होला
चुरोट पिउनेले जति सक्दो चाँडो आफ्नो आदत त्यागेमा यसअघि चुरोटले दिमागमा पारेको क्षतिबाट बच्न सक्ने अनुसन्धानकर्ताहरुले बताएका छन् । दिमागको शक्तिलाई पूर्ववत् अवस्थामा राख्न ७० वर्षपछि पनि चुरोट रोक्न सकिने उनीहरुको सुझाव छ । युनिभर्सिटी अफ इडनबर्कका वैज्ञानिकहरुले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ अनुसन्धानअनुसार चुरोटले दिमागको बाहिरी पत्रलाई पातलो बनाउँछ । वृद्धावस्थासँगै दिमागको पत्र पातलो हँुदै जानु स्वाभाविक हो । तर चुरोट पिउने मानिसहरुको दिमागी…विस्तृत समाचार »
स्वास्थ्य परीक्षण सम्पन्न
२८,पुस,वीरगंज । लायन्स क्लवका संस्थापक मेल्विन जोन्सको ९९ औ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा लायन्स क्लव अफ वीरगंज सेन्टरलको आयोजनामा जनजाति प्रावि वीरगंजमा सोमबार जेनरल हेल्थ चेकअप कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । ८० छात्र र २५ छात्राको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुका साथै उनीहरुलाई आवश्यक ताकत, जुकाको औषधि तथा बिस्कुट आदि समेत बितरण गरिएको थियो । आशाराम अस्पतालका बरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा अशोक दासले विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरेका थिए । कार्यक्रममा…विस्तृत समाचार »
महाकुम्भमा सिएमए संघले निशुल्क प्राथमिक उपचार शिविर संचालन गर्ने
पुस,अत्तरिया । गोदावरीधाम क्षेत्रमा माघ १ गते बाट लाग्ने सहस्त्र महाकुम्भ मेलामा निशुल्क प्राथमिक उपचार शिविर संचालन हुने भएको छ । नेपाल सिएमए संघको आयोजनामा निशुल्क प्राथमिक उपचार शिविर संचालन हुने भएको हो । मेला अवधिभर सञ्चालन हुने प्राथमिक उपचार शिविर कुण्ड आसपासको क्षेत्रमा संचालन हुने नेपाल सिएमए संघको केन्द्रिय अध्यक्ष गणेश साँउदले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मेलामा कसैलाई चोटपटक लागेको खण्डमा प्राथमिक उपचारका साथै…विस्तृत समाचार »
‹ First Newer 63 64 65 66 67 Older Last ›